वर्षको अन्त्यको लागि सबै भन्दा राम्रो पुरुष सूट | स्टाइलिश पुरुषहरू
वर्षको अन्त्यको लागि सबैभन्दा राम्रो पुरुष सूट
इग्नासियो साला | 29/12/2021 12:00 | जीवन शैली
यदि वर्षको अन्त्य हुन केही दिन मात्र बाँकी छ र तपाईलाई अझै पनि थाहा छैन कि वर्षको अन्त्य मनाउन के लगाउने, महामारी मार्फत, तपाई सही लेखमा आउनुभएको छ। यस लेखमा, हामी तपाईंलाई देखाउन जाँदैछौं वर्षको अन्त्यको लागि सबै भन्दा राम्रो पुरुष सूट। वेशभूषाहरू वर्षको कुनै पनि समयको लागि उपयुक्त छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यो गाइड पनि उपयोगी छ जब तपाईं आफ्नो वार्डरोब नवीकरण गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ।
यदि हामीसँग पर्याप्त पैसा, र समय छ भने, त्यहाँ एक अनुरूप सूट जस्तो केहि छैन, हरेक मानिसको सपना। एकचोटि तपाईंले कुन प्रकारको सूट तपाईंलाई सबैभन्दा राम्रो सूट गर्नुहुन्छ र तपाईंको शैलीसँग राम्रोसँग जान्छ भन्ने बारे स्पष्ट भइसकेपछि, हामी तपाईंलाई देखाउनेछौं पुरुषहरूको लागि उत्तम सूट, सूटहरू जुन हामी निर्माताहरूमा विभाजन गर्नेछौं, यसलाई छनौट गर्न धेरै सजिलो बनाउन।
यद्यपि अनलाइन किन्न एक सामान्य कुरा भएको छ, पुरुषहरूको लागि सूटको मामलामा, जस्तै यो महिलाहरूको लागि लुगा हो, चीजहरू राम्रोसँग समाप्त हुन सक्दैन, विशेष गरी जब हाम्रो शरीरमा सामान्य मापन छैन।
सौभाग्यवश, धेरैजसो ब्रान्डका सूटहरूमा साइज गाइड हुन्छ, त्यसैले घरमै मापन गर्न र पछि हामीलाई सबैभन्दा मनपर्ने मोडेलहरूमध्ये कुन हाम्रो शरीरलाई सुहाउँछ भनेर जाँच्न सल्लाह दिइन्छ।
यस तरिकाले, हामी यो सुनिश्चित गर्नेछौं कि हामीले उपयुक्त साइजको सूट प्राप्त गर्छौं। थप रूपमा, अनलाइन बेच्ने धेरै कम्पनीहरू जस्तै, तिनीहरूले हामीलाई निश्चित समय भित्र उत्पादन फिर्ता गर्न अनुमति दिन्छ, यदि तपाईंसँग धेरै समय छैन वा तपाईं पसलहरूमा जान चाहनुहुन्न भने, सूट अनलाइन खरीद गर्नको लागि एकदम मान्य विकल्प हो। विचार गर्नुहोस्।
यदि हामी सूटका ब्रान्डहरूको बारेमा कुरा गर्छौं, बजारमा हामीसँग विचार गर्न विकल्पहरूको ठूलो संख्या छ। हामीले तपाईंलाई तल देखाउने सबै निर्माताहरूले विभिन्न प्रकारका सूटहरू, सूटहरू जुन हामीले कुनै पनि घटनामा प्रयोग गर्न सक्छौं, त्यो व्यक्तिगत उत्सव होस्, विवाह, नामकरण, वर्षको अन्त्य, जन्मदिन वा केवल जाने होस्। हरेक दिन काम गर्न।
2 ह्यूगो बोस
3 राल्फ लरेन
5 मार्क्स र स्पेन्सर
स्पेनिश कपडा कम्पनी मङ्गो एक विशेष उद्देश्य संग स्थापित भएको थियो: संग लुगा बनाउन को लागी भूमध्य सार। आँपले आफ्नो प्राकृतिक र समसामयिक शैलीलाई धेरै सहज कपडाहरूसँग जोडेर ३० वर्षअघिदेखि नै आफ्नो उद्देश्य कायम राखेको छ।
यसका अतिरिक्त, यसमा क्लासिक विकल्पहरूदेखि लिएर कहिल्यै शैलीबाट बाहिर नआउने प्लेन सूटहरू, चेक गरिएका सूटहरू र प्रिन्टहरू सम्मका सबै प्रकारका सूटहरू छन् जसले हामीलाई हाम्रो व्यक्तित्व अनुसार हाम्रो वार्डरोब विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ।
यो स्पेनिश निर्माता द्वारा भने अनुसार, एक आम सूट हामीलाई अनुमति दिन्छ आफ्नो नियम संग ड्रेस कोड पालना गर्नुहोस्.
जर्मन लक्जरी फेसन हाउस ह्युगो बॉस पुरुषका कपडा, सामान, जुत्ता र सुगन्धको विस्तृत श्रृंखलाका लागि परिचित छ। यो 1924 मा यसको प्रारम्भिक वर्षहरूमा स्थापना भएको थियो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नाजी वर्दी निर्माण गर्न कमिसन गरिएको थियो। संस्थापक, ह्युगो बोसको 1948 मा मृत्यु पछि, कम्पनीले आफ्नो गतिविधि पुरुषको सूटको निर्माणमा केन्द्रित गर्यो।
हाल, ह्युगो बॉसले पुरुष र महिलाको फेसन लाइनहरू साथै सुगन्धहरू सिर्जना गर्दछ, यद्यपि, पुरुषहरूको सूटको श्रेणीमा बेन्चमार्क हो। यदि तपाइँ विलासी सूट खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो तपाइँले खोजिरहनु भएको ब्रान्ड हो र यसको अतिरिक्त, यो मूल्य मा जादैन।
1967 मा, राल्फ लरेनले समयको प्रवृतिहरूको अवज्ञामा टाईको साथ आफूलाई सुरु गरे। त्यसको केही समय पछि, उनले आफ्नो गतिविधिलाई फराकिलो सम्बन्धहरूको सङ्कलनमा केन्द्रित गरे जुन सफल भयो। त्यसबेलादेखि, कम्पनीले संसारभरि परिचित साम्राज्य बन्नको लागि फेशन संसारका अन्य क्षेत्रहरूमा बढेको र विस्तार गरेको छ।
राल्फ लरेनसँग पातलो, पातलो लुकको लागि विशेषज्ञ रूपमा तयार पारिएको उत्कृष्ट रूपमा काटिएको, पन्जा-जस्तो सूटहरूको दायरा छ। राल्फ लरेन सूटहरू संसारमा सबैभन्दा महँगो छन् र यदि हामीसँग पैसा र प्राय: यसलाई लगाउने अवसर छ भने यसले गुणस्तरको लागि तिर्छ।
सन् १९४६ मा स्थापना भएको फ्रान्सेली लक्जरी फेसन हाउस डायरले उच्च गुणस्तरका कपडा र सुगन्धहरू डिजाइन गर्छ। यद्यपि यो ब्रान्ड मुख्यतया महिलाहरूलाई लक्षित गरी राखिएको छ, तर यसमा डिभिजन भित्र परिष्कृत पुरुषहरूको लुगाहरू पनि छन्। डायर पुरुष 2000 को दशक मा सुरु भएको एक विभाजन।
यस तथ्यको बावजुद Dior को सूट को दायरा यो विशेष चौडा छैन, पुरानो भनाइ "गुणस्तर भन्दा मात्रा" फेसन को मामला मा, एक पटक फेरि लागू हुन्छ। एक डायर मेन सूटले परम्परागत इटालियन शिल्प कौशल र समकालीन लालित्य प्रदान गर्दछ विभिन्न प्रकारका कपडाहरूमा सबै अवसरहरूको लागि उपयुक्त।
मार्क्स र स्पेन्सर
मार्क्स र स्पेन्सर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश खुद्रा विक्रेता हो जुन 1984 मा स्थापित भएको थियो। कपडा, घरायसी सामान र खानाको उत्पादनको लागि परिचित, पुरुषको सूट खण्ड कम्पनीको सबैभन्दा उत्कृष्ट मध्ये एक हो।
मार्क्स र स्पेन्सरको सूटको विस्तृत दायराले निर्दोष शिल्प कौशललाई कालातीत डिजाइनहरूसँग जोड्दछ जुन विवाह र औपचारिक कार्यक्रमहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ, तर दैनिक पहिरनमा व्यावसायिक स्वभावको स्पर्श पनि थप्छ।
तिनीहरूका सूटहरू सामान्यतया तीन टुक्राहरू र समकालीन स्लिम-फिट कटहरू, ऊन-मिश्रित कपडाहरूमा बनाइएका हुन्छन्, र तिनीहरू धेरै किफायती पनि हुन्छन्।
इटालियन लक्जरी फेसन हाउस अरमानी, 1975 मा स्थापना भएको, फेसन संसारमा प्रतिष्ठाको स्तरमा पुगेको छ, यसको भव्य हाउटे कउचर कपडाहरू र पुरुष र महिलाहरूका लागि परिष्कृत रेडी-टु-वेयरका कारण।
अरमानी पुरुष सूटहरू उच्च गुणस्तर र प्रतिष्ठित कपडाहरू संग एक अतुलनीय शैली संग क्लासिक भव्यता संग बनाइन्छ।
अरमानी दायराका सूटहरू टाइमलेस रंगहरूमा, सामान्य कट र फिटमा उपलब्ध छन्, र पक्कै पनि कुनै पनि हावाको ध्यान आकर्षित गर्नेछ। तपाईले आशा गर्न सक्नुहुन्छ, अरमानी घरका सूटहरू सस्तो छैनन्।
यद्यपि बर्बेरी यसको प्रतिष्ठित ट्रेन्च कोटको लागि सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। यद्यपि, यसले पुरुष र महिला दुवैका लागि गुणस्तरीय कपडा र सामानहरूको एक विस्तृत विविधता पनि उत्पादन गर्दछ।
1856 मा स्थापित, यो ब्रिटिश लक्जरी कम्पनी, Burberry एक पुरानो आत्मा स्वाद संग आधुनिक सज्जन को लागी ब्रिटिश सम्पदा सिलाई प्रदान गर्दछ। यसले थप आधुनिक डिजाइनहरू र अप-टु-डेट सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै कपडाहरू, प्लेड ट्रिम र क्लासिक प्रविधिहरूबाट प्रेरणा लिन्छ।
Suitsupply, एक डच कम्पनी, ठाडो एकीकरण संग पुरुष को लुगा र सामान को उत्पादन मा एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य ले यो उचित मूल्य मा उच्च गुणस्तर इटालियन कपडा प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ।
योसँग निर्दोष सूटहरूको एक विस्तृत श्रृंखला छ जसले बजारमा सबैभन्दा राम्रो ज्ञात र सबैभन्दा महँगो ब्रान्डहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। थप रूपमा, तपाइँसँग तपाइँको आफ्नै सूट सिर्जना गर्ने विकल्प छ, कपडाको प्रकारबाट लेपलको चौडाइ सम्म।
के तपाई किफायती मूल्य मा एक अनुकूल सूट खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईंले यसलाई Suitsupply मा पाउनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » जीवन शैली » वर्षको अन्त्यको लागि सबैभन्दा राम्रो पुरुष सूट